#recording hashtag | Othersta
Jirson | Mius
Mr. CARLOS VERGARA
Diego Armando Landaeta Fdez
Ernesto The Latin Divos
J O W E R 💎
NAVID ECHO 🎤📟
♪Luis S. drum♪♬♫♪
Ieri sono andato da #bandieraaVia Cavourenon resistitoafarmi un giro con questo piccolo gioiellino. Potrebbe diventare l'asso nella manica delle prossime produzioni del #terradincantostudio. Come vi sembra? #precision #fender #bass #recording #music #popmusic #producer #arrangiandoarrangiandosi #lamusicaseitu
#bass #fender #squier #ampeg #8x10 #valvolare #rec #recording #registrazione #vdss
ရန်ကုန်မြို့သည် မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နှင့် စည်ကားလှသည့် မြို့တစ်မြို့ဖြစ်၍ မြို့၏အရသာကို စီးဝင်ခံစားမည်ဆိုလျှင် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးတွင် လည်ပတ်သည်ထက် ပိုကောင်းသည့်နည်းလမ်းဟူ၍ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ယခင်စကော့ဈေးဟုခေါ်ဆိုသည့် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသည် မြန်မာနိုင်ငံကို ဗြိတိသျှတို့ အုပ်ချုပ်သည့်ခေတ်နှောင်းပိုင်း ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဈေးကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် တွင်တည်ရှိပြီး ကိုလိုနီခေတ်ဗိသုကာလက်ရာကြောင့် လူသိများထင်ရှားလှပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့၏အကြီးဆုံးဈေးများထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ကာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများနှင့် ဒေသခံများဖြင့် အမြဲတစေ စည်ကားလျက်ရှိပါသည်။ ဈေးကြီးတွင် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်လေးများအစီအရီရှိနေပြီး ပန်းချီကားချပ်များ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ ပန်းပုလက်ရာရုပ်ထုများ၊ အဝတ်အထည်များ စသည်တို့ကဲ့သို့ လက်မှုပညာပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည်။ တနင်္လာနေ့တိုင်း ဈေးပိတ်ပါသည်။ ရက်သတ္တပတ်၏ကျန်သည့်ရက် ၆ ရက်တွင် မနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၅.၃၀ နာရီထိ ဈေးဖွင့်ပါသည်။ ယမန်နှစ်က အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာ၊ ကိုရီးယားမှ မြန်မာ၊ တရုတ်မှ မြန်မာ ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနေသည့်အပြင် အသံထည့်သွင်းခြင်း/ စာတန်းထိုးခြင်း/ နောက်ခံစကားပြောခြင်းတို့ကို နာရီ ၁၀၀၀ ကျော်ထုတ်လုပ်ပေးပြီးဖြစ်သည့် အဆင့်မြင့်အသံသွင်းခန်း ၄ ခန်းပါရှိသော ကျွန်တော်တို့၏ ရုံးခန်းအဆောက်အအုံသည် ထိုဈေးမှ ကားဖြင့် ၁၅ မိနစ်ခရီးတွင်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီသည် DUBnSUB ကုမ္ပဏီဖြစ်ရာ အသံထည့်သွင်းခြင်း၊ နောက်ခံစကားပြောခြင်း၊ အသံနှင့်အတူ ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ စာတန်းထိုးခြင်းနှင့် ဖြည့်စွက်စာသားထိုးပေးခြင်းတို့အတွက် ဘာသာစကားပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် Germany၊ France၊ USA၊ Myanmarတို့တွင် ရုံးခွဲများကို တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ရုံးချုပ်သည် Gurgaon (India) တွင်တည်ရှိပါသည်။ ပိုမိုသိလိုပါက ဖော်ပြပါလိပ်စာကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ info@dubnsub.com. ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကူညီပေးသွားပါမည်။ . . #dubbing #subtitling #voiceover #postproduction #language #burmese #bogyokemarket #myanmar #recordingstudio #recording ပုံ (၁): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jewellery_Market,_Yangon,_Myanmar.jpg
*COVER SONG :7Things by @mileycyrus . . . . #smule #sing #cover #song #music #fun #love #recording #new #like4like
Making of Twin Peaks . . . . . . . . . #davidlynch #twinpeaks #lodge #blacklodge #agent #dalecooper #laurapalmer #red #redcurtain #shooting #dream #indreams #giant #angelobadalamenti #tvseries #screen #filmming #makingof #moviefestival #markfrost #writing #scenario #dave #episode #recording #film #dreamplace #camera #piano #keyboards
WERKIN 24/7 LIKE A7ELEVEN 🕒 👇 #rapsavedme ✝ #HighQuality #LowRates #Recording #Mixing #Mastering #Vocals #Booth #Production #Beats #FLStudio #Producers #Engineers #Songwriters #ProToolsHD #Neumann #Avalon #Yamaha #Control24 #Waves #SSL #Digidesign #Videoshoot #Photoshoot #Professional #Private #Studio #DfGStudios🎤 #mMm4Liiiiiife🎹
MooSuraphan : 🎸”Songwriter”
.. นานๆ ดูได้สักที .. ✨ Yesterday at Ch7hd. 📷 by Joy #originalsoundtrack #ost #workingout #recording #studio #instrument #loveisallaround #travellover #backpacker #acousticguitar #guitar 🎸 #gibsonguitar #martinguitar #taylorguitar #read #dramaticcomposition #writingsongs #producer #songwriter #music #songs #หมูน้อยพเนจร
Coming soon. NEW DUFLAZI. Yall Ready?🤫🔥 #comingsoon @therealduflazi Follow @hiphopfleez 🚨For More Hip Hop related content. ⛽☆Yall be good☆ & HIT THE LINKINBIO FOR NEW MUSIC VIDs + More !LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE .♤ We in Here Den♤#rapblog#musicblog#youtube#youtubevideos#official#show#shows#musicvideos#news#magazine#newmusicalert #instagram#artistoftheday#unsignedrapper#talent#artist#musicvideo#newmusic#upcomingartist#worldstar#freestylerap #wshh#rapper#hotnewhiphop#rappers#newvideo#records#recording#movie